Ukukhiqizwa kwemifino eyomile, izithelo namajikijolo eRussia kuye kwanda - umagazini i- "Potato System"
Ukukhiqizwa kwemifino eyomile, izithelo namajikijolo eRussia kwanda
I-Russia inyuse ukukhiqizwa kwemifino eyomile, izithelo namajikijolo ngokwezimali ngama-ruble ayi-3,3 billion ngo-2020. Lokhu kushiwo ocwaningweni lwe-ejensi yezentengiso i-ROIF Expert "Imakethe yemifino eyomisiwe, izithelo namajikijolo eRussia: ucwaningo nesibikezelo kuze kufike u-2025", okulungiselelwe ngo-2021.
"Imakethe yasekhaya yemifino eyomisiwe, izithelo kanye namajikijolo ngonyaka we-2020 ikhombise amandla aqinile okwenyuka kwevolumu yezimakethe ngokomzimba nangamanani entengo, kuyilapho ukwanda okukhulu kokuthunyelwa kwamanye amazwe kube umkhuba ocacile," kusho abahlaziyi be-ROIF Expert .
Ngo-2020, ukuthekelisa imifino eyomisiwe, izithelo namajikijolo avela eRussia kukhuphuke ngama-49% ngokwezimali nangama-53% ngokomzimba. IMongolia ne-Ukraine baba amazwe amakhulu angenisa imikhiqizo yaseRussia.
Tags: Ukukhiqiza Imifino Eyomileukuthekelisa imifino eyomile